Maamulka gobolka Hiiraan”Waxaan si buuxda u taageeraynaa madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maamulka gobolka Hiiraan”Waxaan si buuxda u taageeraynaa madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle
Kadib Shir jaraa’id uu ku qabtay magaalada Baladwyen ee xarunta Gobolka Hiiraan,guddoomiyha gobolka ayaa kaga hadlay xaaladda gobolka, waxaana uu soo dhaweeyay Madaxwaynaha cusub ee Hirshabeelle oo ay doorteen xildhibaanada baarlamaanka HirShabeele.
Cumar Aadan Ibraahim Baadiyo guddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Baladwyene Waxa uu hambalyo udiray Madaxweynaha cusub ee Dowlad goboledka hirshabele Mudane Maxamed Cabdi Awaare, waxaana uu shacabka Hirshabeelle ugu baaqay inay la shaqeeyaan maamulka.
“Waxaan soo dhaweynayaa guusha uu gaaray madaxweynaha cusub ee la doortay hirshabeelle,waxaan u diraynaa hambalyo iyo bogaadin,waxaana shacabka reer Hirshabeele aan ka codsanayaa in ay la shaqeeyaan hoggaanka cusub”,ayuu yiri Guddoomiye Baadiyow.
Dhinaca kale Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyay howgal ciidanka xooga dalka soomaliyeed ay kubaacsanayaa maleeshiyaad katirsan kooxda Shabaab, isagoo xusay in ciidamadu ay ka hor tageen weerar ay koxdaasi ku soo qaadeen deegaanka Kalabeyr oo qiyasti 25 km dhanka Waqooyi kaga beegan magalaada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
Wuxuu sheegay in xaaladda deegaanku ay tahay mid degan iyo nawaaxigeeda ayna si buuxda ugu sugan yihiin ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed,isagoo intaasi ku daray in maleeshiyada Shabaab laga sifeyn doono guud ahaan Gobolka.
Previous articleDibad baxyo looga soo hor jeedo xaqsuuqa Muslimiinta Rohinga oo ka dhacay K/Africa
Next articleMaamulka Gobolka Hiiraan”Waxaan si buuxda u taageeraynaa madaxweynaha Cusub ee Hirshabeelle